စင်ကာပူဗီဇာ – Singapore Visa | Singapore Personalized Patient Care
ဒီနိုင်ငံကို ၀င်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဗီဇာလိုပါတယ်။ ဆေးကုသမှုဗီဇာ (သို့) အလည်အပတ်ဗီဇာကို လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါလျှောက်ရင် တစ်လ ဗီဇာပေးလေ့ရှိပြီး သက်တမ်းထပ်တိုးရင် နောက်ထပ်နှစ်လ ထပ်ရနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း (အီးဗီဇာ) (သို့) ရန်ကုန်က စင်ကာပူသံရုံးမှာ တိုက်ရိုက်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလာကုမယ့်သူရော အတူလိုက်လာမယ့်သူအတွက်ပါ လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဖို့ ချိန်းထားတဲ့ အပွိုင့်မန့်စာ (appointment letter) (သို့) အပွိုင့်မန့် နံပါတ်၊ အချိန်၊ ရက် စတာတွေလိုပါတယ်။ အွန်လိုင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ စင်းပါ့စ်အကောင့် ရှိတဲ့ အသက်၂၁နှစ်အထက် စင်ကာပူပီအာ (သို့) နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ယောက်က စပွန်စာ လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
အီးဗီဇာ – Electronice Visa
မကြာသေးမီကရိုက်ထားတဲ့ ပါ့စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (သုံးလအတွင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံ၊ နောက်ခံအဖြူရောင်၊ ကာလာဓါတ်ပုံ၊ မျက်နှာသေချာပေါ်ရမည်။)
ပါ့စ်ပို့နံပါတ်၊ ပါ့စ်ပို့ထဲက နံမည်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ရက်၊ သက်တမ်းကုန်တဲ့ရက်
၂။ အွန်လိုင်းတင်ထားတဲ့အဖြေကို ဘယ်လိုသိရမလဲ။
သင်၏ အီးမေးလိပ်စာဖော်ပြပေးထားလျှင် သင့်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းရဲ့ အဖြေကို အီးမေးဖြင့် ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက Status Enquiry ဆိုသည့် လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး အခြေအနေကို သိနိုင်ပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းတွင် လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့အတွက် နိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာမယ့်သူတွေကို ဗီဇာ လျှောက်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဗီဇာတင်ထားပြီးအဖြေကို ဘယ်လိုနဲ့ ဘယ်တော့ သိရမလဲ။
အီးဗီဇာတင်ထားတာဆိုရင် အဖြေကို နောက်ရုံးဖွင့်ရက်မှာ သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ ပေးထားရင် ချက်ခြင်းပို့ပေးပါတယ်။ အီးမေးလိပ်စာမပေးထားရင် http://www.ica.gov.sg အဲဒီလိပ်စာက “Status Enquiry” မှာ အဖြေကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။
၅။ အီးဗီဇာ တင်လို့မရတဲ့နိုင်ငံကဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
အီးဗီဇာ တင်လို့မရတဲ့နိုင်ငံကလူတွေဆိုရင် အွန်လိုင်းနဲ့ SAVE (Submission of Application for Visa Electronically) ကနေတစ်ဆင့် တင်ပြီး မိမိဗီဇာကို ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ရင် အိုင်စီအေရုံးမှာ စတစ်ကာ သွားယူဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်ရိုက်အီးဗီဇာတင်လို့မရတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာပါပါတယ်။
၆။ မိမိရဲ့ စပွန်ဆာလုပ်သူ (သို့) ဗီဇာလျှောက်သူက အီးဗီဇာဖောင်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာလိုသလား။
စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ မိမိရဲ့ စပွန်ဆာလုပ်သူ (သို့) ဗီဇာလျှောက်သူက အီးဗီဇာဖောင်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာမလိုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ အိုင်စီအေရုံး(Immigration and Checkpoint Authority)က လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမျိုးရှိပါတယ်။
၇။ မိမိရဲ့အီးဗီဇာ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
http://www.ica.gov.sg ၀က်ဘ်ဆိုက်ထဲက “Status Enquiry” ကို နှိပ်ပြီး ပရင့်ပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်။
၈။ အီးဗီဇာကို စာရွက်နဲ့ထုတ်ပြီးယူလာရမလား
အီးဗီဇာကို ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီး ယူလာရပါမယ်။ Airport check-in လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီစာရွက်ကို ပြရပါမယ်။
၉။ အီးဗီဇာရှိရင် အိုင်စီအေရုံးမှာ စတစ်ကာ သွားယူစရာလိုသေးလား။
With the e-Visa, there is no need to collect the visa sticker at ICA Building. အီးဗီဇာရှိရင် အိုင်စီအေရုံးမှာ စတစ်ကာ သွားယူစရာမလိုတော့ပါ။
စင်ကာပူသံရုံး၊ ရန်ကုန်တွင် ဗီဇာတင်ခြင်း
လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားလုံး သေချာဖြည့်ထားသော လျှောက်လွှာ (form 14A)ကို စင်ကာပူသံရုံးရှိ Consular section တွင် တင်ရပါမည်။ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ..
အနည်းဆုံး (၆)လ သက်တမ်းကျန်သေးသည့် ပါ့စ်ပို့
အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်။ အကယ်၍လက်မှတ်လက်ဝယ်မရှိသေးဘူးဆိုလျှင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်နံပါတ်၊ ခရီးစဉ်အချိန်ဇယား၊ သွားမည့်နေ့နှင့် ပြန်မည့်နေ့များကို တင်ပြရပါမည်။
ပါ့စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ (သုံးလအတွင်းရိုက်ထားသည့်ဓါတ်ပုံ၊ နောက်ခံအဖြူရောင်၊ ကာလာဓါတ်ပုံ၊ မျက်နှာသေချာပေါ်ရမည်။)
လျှောက်လွှာတွင် တင်ပြထားသည့် သွားမည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ. ဆရာဝန်နှင့်ချိန်းထားသော အပွိုင့်မန့်/အလုပ်ဖြင့်ခရီးသွားမည့်သူများအတွက် အလုပ်ရှင်၏စာ/ စပွန်ဆာထံမှစာForm V39A (Letter of Introduction for Visa Application))
ဗီဇာအဖြေသိရန်..ရုံးဖွင့်ရက် နှစ်ရက်ကြာပါသည်။ သို့သော် အိုင်စီအေရုံး (Immigration and Checkpoint Authority) သို့ လွှဲပေးရသော အချို့သောသူများအတွက် ပျမ်မျှအားဖြင့် ၄ပါတ်မှ ၆ပါတ်အထိကြာတတ်ပါသည်။
(၆) လနှင့်အထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ၀င်ခွင့်ရရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် အလည်အပတ်ဗီဇာ Social Visit Passes for Expectant Mothers ကို စင်ကာပူသံရုံးမှတစ်ဆင့်လျှောက်ရပါမည်။ အဖြေသိရန် ပျမ်းမျှ ၄-၆ ပါတ် ကြာတတ်ပါသည်။
စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်ချိန်မှာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဇာမရလျှင် (သို့) ဗီဇာလျှောက်လွှာ ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလျှင် ငွေပြန်မအမ်းပါ။